Red Lion Controls ဖြန့်ဖြူး | Red Lion Controls အီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများဖြန့်ဖြူး - Infinite-Electronic.hk
နေအိမ်လိုင်းကဒ်Red Lion Controls
- အနီရောင်ခြင်္သေ့ '' ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံ York မြို့, Pennsylvania ပြည်နယ်အတွက်၎င်း၏ဌာနချုပ်တည်ရှိရာထိန်းချုပ်မည်။ ဒါဟာခေတ်သစ် 100,000 စတုရန်းပေစက်ရုံ mount နှင့်ဘုတ်အဖွဲ့ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်အပေါ် chip ကိုနောက်ဆုံးပေါ်မျက်နှာပြင်ရှိပါတယ်။ အနီရောင်ခြင်္သေ့ရဲ့အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့ကနှစ်ဦးစလုံးစံထိန်းချုပ်မှုထုတ်ကုန်အဖြစ်ထုံးစံနှင့်ပြုပြင်မွမ်းမံ OEM ထုတ်ကုန်လိုအပ်ချက်များကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျယ်ပြန့်များအတွက်ထုတ်ကုန်အသစ်ဒီဇိုင်းကိုပေးပါသည်။ အဆိုပါ QA သို့ဌာနသို့အလွန်အလေးအနက်ထားရညျအသှေးထုတ်ကုန်များ၏ပို့ဆောင်မှုအဘို့မိမိတို့တာဝန်ယူ, ထိုသို့အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုထုတ်ကုန်အတွက်အလွန်အကောင်းဆုံးနှငျ့ကြှနျုပျတို့၏ဖောက်သည်ပေးမှကြွလာသောအခါရိုးရိုးအလျှော့ပေးလိုက်လျောပါဘူး။
အနီရောင်ခြင်္သေ့ရေတွင်းလေးပါးထိန်းချုပ်မှုထုတ်ကုန်ဒေသများရှိလူသိများသည်ထိန်းချုပ်မည်: လူ့စက် Interface ကို; ဖြစ်စဉ်ကိုအတိုင်းအတာနှင့်ထိန်းချုပ်ရေး; signal အခြေအနေများနှင့်ထိန်းချုပ်ရေး; ဒစ်ဂျစ်တယ်အတိုင်းအတာနှင့်ထိန်းချုပ်ရေး။ လေးပါးစျေးကွက်၏တစ်ဦးချင်းစီအတွက်, RLC ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံတကာဖောက်သည်အခြေစိုက်စခန်းများ၏လိုအပ်ချက်များအစေခံရန်အရည်အသွေးနှင့်တန်ဖိုးကို oriented ထုတ်ကုန်များ၏ပြည့်စုံသောမိသားစုရှိပါတယ်။ အမြားအပွားကိစ္စများတွင်, ဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့် fieldbus ဆက်သွယ်ရေးကတဆင့်, လေးခုထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကနေထိန်းချုပ်မှုစနစ်များပြည့်စုံထိန်းချုပ်မှုစနစ်အားတည်ဆောက်ရန်အတူတကွအကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိသည်။ အဆိုပါ York မြို့, Pennsylvania ပြည်နယ်ဌာနချုပ်အပြင်, Slough, အင်္ဂလန်နှင့် Croissy Beaubourgh, ပြင်သစ်နှစ်ခုဥရောပစျေးကွက်ရှာဖွေရေးရုံးတွေရှိပါတယ်။ အနီရောင်ခြင်္သေ့ Fairey Group မှ Plc, တစ်ဦးအီလက်ထရောနစ်ထိန်းချုပ်မှုအတွက်အထူးပြုဖြစ်စဉ်ကိုနည်းပညာကုမ္ပဏီ, လုပ်ငန်းစဉ်အားကိရိယာနှင့် filtration စနစ်များအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်ထိန်းချုပ်မည်။
ဖေါ်ပြချက်: PX2C VERTICAL
ဖေါ်ပြချက်: CONV DC/DC 15W 36-75VIN +/-12VOU
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 10 pcs
ဖေါ်ပြချက်: TYPE T 0-250 F
ဖေါ်ပြချက်: LED DRIVER CC BUCK 3-31V 1A
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 8184 pcs
ဖေါ်ပြချက်: AMMETER 0-200MA LCD PANEL MOUNT
ဖေါ်ပြချက်: LED DRIVER CC DC/DC 0.7A 2-35
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 5431 pcs
ဖေါ်ပြချက်: CONV DC/DC 8W 18-75VIN +/-12VOUT
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 8 pcs
ဖေါ်ပြချက်: 7026TX-AC US POWER CORD
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 3059 pcs
ဖေါ်ပြချက်: COUNTER LCD 8 CHAR PANEL MOUNT
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 1158 pcs
ဖေါ်ပြချက်: TACHOMETER LED6CHAR 85-250V
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 353 pcs
ဖေါ်ပြချက်: DISP OPTION CARD DEPND LED PNLMT
ဖေါ်ပြချက်: PROCESS METER LED PANEL MOUNT
ဖေါ်ပြချက်: DC/DC CONVERTER +/-12V 3W
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 7251 pcs
ဖေါ်ပြချက်: MOUNTING ADAPTER CUB4/5 DT8
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 2488 pcs
ဖေါ်ပြချက်: TACHOMETER LED6CHAR 115/230V
ဖေါ်ပြချက်: NETWORK SWITCH-UNMANAGED 8 PORT
ဖေါ်ပြချက်: NETWORK SWITCH-UNMANAGED5PORT
ဖေါ်ပြချက်: NEOFLON TYPE K 25 FT 24 AWG
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 1632 pcs
ဖေါ်ပြချက်: NETWORK SWITCH-MANAGED 8 PORT
ဖေါ်ပြချက်: IAMS WITH ANALOG
ဖေါ်ပြချက်: CONV DC/DC 1W 05VIN 05VOUT THT S
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ:9pcs
ဖေါ်ပြချက်: TEMP METER LED PANEL MOUNT
ဖေါ်ပြချက်: RELAY TIME DELAY 999.9HR 5A 250V
ဖေါ်ပြချက်: CONV DC/DC 20W 9-18VIN 15VOUT TH
ဖေါ်ပြချက်: CONV DC/DC 2W 24VIN 3.3VOUT
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 7969 pcs
ဖေါ်ပြချက်: OPTION CARD INPUT LPAX0500
ဖေါ်ပြချက်: 3-COND. 3-PIN W/25 FT CABLE
ဖေါ်ပြချက်: DC/DC CONVERTER 12V 1.25A 15W
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 2117 pcs
ဖေါ်ပြချက်: CONV DC/DC 3.5W 9-18VIN 05VOUT T
ဖေါ်ပြချက်: MULTI METER LED PANEL MOUNT
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 505 pcs
ဖေါ်ပြချက်: OPTION CARD COMM PAX MODBUS
ဖေါ်ပြချက်: GIGABIT POE+ INJECTOR
ဖေါ်ပြချက်: ENCLOSURE C48C SERIES CHASSIS MT
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 555 pcs
ဖေါ်ပြချက်: 4-COND. 6-PIN W/10FT CABLE
ဖေါ်ပြချက်: DC DC CONVERTER 15V 5W
ဖေါ်ပြချက်: CONV DC/DC 15W 18-75VIN +/-12VOU
ဖေါ်ပြချက်: BATTERY LITHIUM 3V
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 3769 pcs
ဖေါ်ပြချက်: COUNTER LED6CHAR 85-250V PANEL
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 410 pcs
ဖေါ်ပြချက်: CONV DC/DC 1W 24VIN +/-05VOUT TH
ဖေါ်ပြချက်: PROC MTR 20MA/10VDC LED PNL MT
ဖေါ်ပြချက်: COUNTER LED6CHAR 24V PANEL MT
ဖေါ်ပြချက်: CONV DC/DC 1W 15VIN 09VOUT THT S
ဖေါ်ပြချက်: ACCESS BOARD APOLLO W/TERM BLCK
ဖေါ်ပြချက်: OPTION CARD INPUT LPAXDA00